Ity no hatolotr'i Apple amintsika ny Alatsinainy ho avy | Avy amin'ny mac aho
Ity no hatolotr'i Apple amintsika ny Alatsinainy ho avy izao
Applelised | | Apple TV, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac OS X, About us, tsaho
Andro vitsivitsy monja izao Fampisehoana vaovao an'i Apple izay zava-baovao marobe no antenaina fa tsy fanavaozana tafahoatra koa. Androany no manangona, ary misaintsaina kely ary maminavina izay ho asehon'ny orinasa Cupertino amintsika manaraka Alatsinainy 21 martsa manomboka amin'ny 18:00 Fotoana peninsular Espaniôla.
1.1 iPhone efatra santimetatra
1.2 IPad vaovao 9,7-inch
iPhone efatra santimetatra
Ary lazainay fa iPhone efatra metatra satria tsy misy olona mahalala hoe iza no hiantsoana an'io fitaovana Apple vaovao io. Mihevitra isika fa ny anarany no anarany iPhone SE saingy mety ho iPhone 6C, iPhone 5se ... Ny zava-misy dia ity fitaovana vaovao ity, raha ny tsiliantsofina rehetra, dia hanana efijery efatra santimetatra ary Touch ID, hampiditra chip A9 miaraka amin'ny coprocessor an'ny hetsika M9, ​​hitondra 1GB an'ny RAM ary haseho amina maodely telo voasokajy arakaraka ny fahafahany 16, 64, ary 128 GB; Hifangaro ihany koa izy io, heverina, ny chip NFC izay hahatonga azy hifanaraka amin'ny Apple Pay, sy Bluetooth 4.2. Izy io koa dia hanana bateria somary avo kokoa, misy resaka 1624 mA.
Raha ny fiafarany dia antenaina ho metaly izy io. Veloma amin'ny plastika an'ny iPhone 5c. Ny efijery dia mety nisy boribory boribory, toy ny amin'ny iPhones 6 sy 6 plus, saingy mbola miahiahy ihany ny endriny, toa mety hitovy kokoa amin'ny iPhone 5s noho ny iPhone 6 izy io.
IPad vaovao 9,7-inch
Miresaka momba ny iPad indray izahay ary tsy miresaka momba ny iPad Air 3 na iPad Pro, na dia saika ny tsaho rehetra aza dia milaza fa izay ho hitantsika dia iPad Pro kely indrindra. Toa manomboka izao ny iPad dia hofaritana ho MacBook Pro, noho ny haben'ny efijery.
Raha ny momba ny zava-baovao dia vitsy ny manampy ny teknolojia 3D Touch ary hifanaraka amin'ny Apple Pencil, mety hampiditra ny Smart Connector koa izy io ka hiaraka amin'ny Smart Keyboard kely kokoa ary hanana mpandahateny roa eo amboniny koa, toy ny ny iPad Pro, miaraka amina totaliny efatra.
Ny endriny ivelany dia hitovy amin'ny iPad Air sy iPad Pro. Tsy manantena hahita vaovao momba ny famahana ny efijery na fanatsarana bateria ihany koa izahay. Marihina fa ny iPad 9,7-inch vaovao na iPad Pro dia afaka mampiditra Flash ao amin'ny fakan-tsary farany aoriana, zavatra izay tsy azontsika tsara fa nanjary vatana be dia be tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Apple tsy hanolotra ny Apple Watch 2, izany dia zavatra iray izay tokony hiheverantsika rehetra, tsy ho ela izy io, fa eny ho hitantsika na hitantsika ny sasany modely vaovao amin'ny fehikibo na tarika. Mety loko vaovao ho an'ny Sport Band sy fikambanan-Hermes vaovao izay efa hitantsika volana vitsivitsy lasa izay.
Ary izany rehetra izany raha resaka hardware, fa ny tena izy dia amin'ny alatsinainy dia hanatrika ny fampisehoana fanavaozana goavana ny rafitra miasa finday sy birao Apple rehetra koa izahay.
Ny rafitra fiasa vaovao noforonina ho an'ny Apple TV andiany faha-XNUMX Hampiditra fanohanana amin'ny fampifandraisana ireo klavier Bluetooth izy ary hamela ny fampiharana vondrona ao anaty lahatahiry eo amin'ny efijery lehibe, araka ny hitantsika tao amin'ny fitaovana iOS nandritra ny taona maro. Ho fanampin'izay, hihatsara ny interface App Switcher, ary hampiditra ny fanohanana ny tranomboky sary iCloud ary Sarin'ny fiainana.
tvOS 9.2 Mampahafantatra ny MapsKit ihany koa izy io, ahafahan'ny mpandrindra mampiditra sarintany ao amin'ny fampiharana azy. Ary ampio ny fanohanana Siri amin'ny fiteny maro.
Rehefa manavao ny Apple TV 4 amin'ny rafitra fiasa vaovao dia angatahina isika hampavitrika na hanafoanana ny didim-pitondrana. Zava-baovao iray hafa, didy jadona, izay ahafahan'ny mpampiasa mibaiko lahatsoratra sy manonona ny anaran'ny mpampiasa sy ny teny miafiny fa tsy manoratra azy ireo.
Ny vaovao farany dia amin'ny tvOS 9.2 amin'ny Apple TV 4 vaovao, Siri dia ho afaka hikaroka rindranasa ao amin'ny App Store, izay hanamora kokoa antsika hahita lalao vaovao, fampiharana sns.
iOS 9.3 no fanavaozana lehibe fahatelo an'ny iOS 9 izay navoaka tamin'ny septambra lasa teo. Ny zava-baovao dia misy ny fampidirana ny maody alina, ny mety hiarovana naoty miaraka amin'ny teny miafina, ary koa ny hetsika haingana haingana ho an'ny 3D Touch an'ny iPhone 6s sy 6s plus ary ny programa fanabeazana an'ny iPad miaraka amin'ny fanohanan'ny mpampiasa marobe dia hohatsaraina.
Ny alatsinainy ho avy izao dia hanolotra ny fanavaozana farany ny rafitra fiasan'ny Apple Watch ihany koa i Apple, izay hahafahan'izy ireo miaraka amin'ny iOS 9.3, hanambatra famantaranandro maromaro amin'ny iPhone tokana. Farany afaka mividy azy ireo amin'ny lanjany isika!
Ny interface map ao amin'ny Apple Watch dia havaozina koa miaraka amin'ny bokotra vaovao hahazoana fidirana haingana any amin'ireo adiresy an-trano sy any am-piasana.
Tsy nisy fanovana hafa hita tao amin'ny watchOS 2.2, izay hahitana fanamboarana bibikely maro sy fanatsarana ny fitoniana.
Ary farany, ary raha tsy misy intsony ny tsy ampoizina dia hanolotra ny fanavaozana ny OS X 10.11.4 El Capitan ihany koa i Apple izay misy lafin-javatra vaovao roa toa ny fanohanana naoty voatahiry tenimiafina ao amin'ilay fampiharana -tsoratra avy amin'ny iOS 9.3 kosa, hifantoka amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fanamboarana bibikely kely izay efa hitany hatreto.
Tsy hahita fiovana ivelany izahay.
Ary io ihany no fantatsika hatreto. Raha tsy te-hanaitra antsika vaovao amin'ny zava-baovao i Apple, dia tsy hahita zava-baovao isika, tsy hahita zavatra tsy ampoizintsika intsony isika, noho izany ny Keynote amin'ny Alatsinainy ho avy izao dia fomba fanao tsotra izay hitahirizanay anao araka ny tokony ho izy. nampahafantarina ny momba izay mandritra ny folakandron'ny alatsinainy 21 martsa ho avy izao ao Applelizados ary mazava ho azy, dia aza hadino ny podcast manokana izay havoakanay amin'io alina io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ity no hatolotr'i Apple amintsika ny Alatsinainy ho avy izao
Marco Tohom dia hoy izy:
Ho ahy, izay tsy dia mahalala momba an'i Apple, dia toa vaovao daholo izay rehetra novakiako tao amin'ilay lahatsoratra.
Valiny tamin'i Marco Tohom
Jay Z dia nanala ny Blueprint Trilogy tao amin'ny Apple Music sy iTunes
Fanoroana vitsivitsy momba ny fanasana ifotoran'i Apple